Ahoana ny fomba hanafoanana ny Bixby amin'ny Samsung Galaxy S9 | Androidsis
Ny Galaxy S9 sy S9 + no sainam-pirenena vaovao an'ny Samsung. Ireo finday avo lenta roa dia natolotra tamin'ny MWC farany 2018. Modely roa izay nampiakatra fanantenana betsaka eny an-tsena, noho ny famolavolana sy ny masontsivana azy ireo. Na dia misy antsipiriany iray aza dia azo antoka fa mpampiasa maro no tsy dia tia azy. Satria ny Galaxy S9 dia manana Bixby indray.
Araka ny efa fantatrao, Bixby no mpanampy ny telefaona Samsung. Ny orinasa koreana dia naniry ny hanatevin-daharana ny fironan'ny mpanatrika eny an-tsena amin'ny famoronana ny azy manokana. Na dia hatreto aza tsy mankafy ny fanohanan'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Ny zava-misy fa misy amin'ny fiteny vitsivitsy dia iray amin'ireo lesoka lehibe.
Noho izany, mpampiasa marobe miaraka amin'ny Galaxy S9 no tsy te hampiasa Bixby. Ny ampahany tsara dia ny fahafaha-manafoana ny mpanampy ny avo lenta. Mba tsy hanelingelina intsony izany ary raha tianao dia afaka mametraka mpanampy hafa izay mahazo aina kokoa aminao. Atorinay anao ireo dingana hanafoanana ny Bixby ao amin'ny Samsung avo lenta.
1 Atsaharo ny bokotra Bixby ara-batana
2 Vonoy ny fampahavitrihana ny feo
3 Esory Bixby amin'ny efijery an-trano
Atsaharo ny bokotra Bixby ara-batana
Toy ny telefaona tamin'ny taon-dasa, ny mpanampy dia manana bokotra ara-batana manokana amin'ny telefaona. Misaotra an'ity bokotra ity fa manana fidirana mivantana haingana ianao amin'izany, indrindra ilaina raha vonoina ny efijery finday amin'izao fotoana izao. Satria, ny dingana voalohany hanafoanana ny mpamosavy dia ny fanaovana toy izany amin'ny bokotra anananao.
Mba hanaovana izany dia tsindrio ny lakilema hanombohana ny mpamosavy ary avy eo tsindrio ny kisary miendrika fitaovana mivoaka eo amin'ny farany ambony havanana. Avy eo dia ho hitanao fa mivoaka ny switch, izay ampandehaninao ho fanao. Ity switch ity dia manondro ny bokotra ara-batana. Ny tokony hataontsika dia tsindrio io switch io mba hamonoana ny bokotra Bixby. Amin'izany fomba izany no nahatonga ny bokotra ho tsy misy ilana azy. Ka amin'ny manaraka hanindriana ny bokotra dia tsy hihetsika ny mpanampy Galaxy S9.
Vonoy ny fampahavitrihana ny feo
Ny mpanampy dia manome antsika ny fahafahana mampihetsika azy amin'ny alàlan'ny feo, toy ny saika ny mpanatrika rehetra androany. Noho izany, zava-dehibe ny hanajanonanay io safidy io amin'ny telefaona. Ny dingana hanatanterahana izany dia tena tsotra.
Mila manokatra ny mpamosavy aloha isika, manao izany isika amin'ny fivezivezena avy eo ankavia. Manaraka izany dia tsindrio ny bokotra menio (ireo teboka telo mitsangana) izay hita eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery. Avy eo, miditra ny fikirana izahay. Ao no mila mitady ny switch Bixby Voice. Ho hitanao fa navadika ho default ity switch ity.
Ny hany zavatra tsy maintsy ataontsika amin'ity tranga ity dia ny famonoana io switch io. Amin'izany fomba izany dia tsy hihetsika na hiasa ny mpanampy rehefa manandrana mampihetsika azy amin'ny feo isika. Raha te hampandeha azy amin'ny ho avy ianao dia mitovy ny dingana arahinao.
Esory Bixby amin'ny efijery an-trano
Miaraka amin'ireo dingana teo aloha dia efa nanidy ny mpanampy ny Galaxy S9 izahay. Saingy manana dingana farany tokony hotanterahina izahay, dia ny fanesorana azy amin'ny efijery finday. Amin'ity tranga ity, ny sisa ataontsika dia tsindrio ary tazomy amin'ny rantsan-tananao amin'ny faritra banga amin'ny efijery fanombohana fitaovana. Rehefa afaka segondra vitsy dia ho hitanao fa mihetsika ny efijery.
Eo amin'ny ilany havia no ahazoantsika an'i Bixby ary ho hitantsika fa misy switch eo akaikin'ny anaran'ny mpanatrika. Ity switch ity dia alefa tsy mandeha ho azy. Noho izany, inona no tsy maintsy ataontsika amin'ity tranga ity dia ny mampandeha azy. Amin'izany fomba izany dia hanjavona avy amin'ny efijery an-telefaona finday ilay mpamosavy. Raha te hampihetsika azy indray ianao amin'ny fotoana rehetra, dia tsy maintsy manao toy izany koa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hanafoanana ny Bixby amin'ny Samsung Galaxy S9
Ny lalao tsara indrindra ambanin'ny 25 MB ho an'ny Android